Ngaphambili, malunga nokwakhiwa kweenwele, i-eyelashes kunye nezipikili zazingabantu abambalwa kakhulu abazi. Ngoku ezi nkqubo zifumaneka nakwaphi nabasetyhini. Abaninzi bafuna ukuba ngabanikazi bezikhonkwane ezihle, oku kuphupha kwala mabhinqa aphethe iipilisi ze-nail zendalo zibuthathaka kakhulu. Inkonzo enje, njengezandiso zetambo, ivame ukulawulwa ngabasetyhini abaya kwimeko ejongene nayo, umzekelo, kumtshato. Kodwa emva kokuba i-gel okanye iisilisi ze-acrylic zisuswe, bonke abafazi baqala ukucinga ngendlela yokubuyisela izipikili emva kokwakha. Lapha umehluko usetyenziswa ezindleleni ezisetyenziselwa ukubuyisela izipikili okanye kwinqanaba lomonakalo kwisiqwenga semvelo.
Kutheni kubalulekile ukubuyisela izipikili?
Abaqali be-manicurists abaqedile iikhosi enye yeeveki kule nkqubo njengoko ukunyanyiswa kwesikhonkwane kunye neenkosi kwiironi zexabiso ezibizayo abayi kukwazi ukuxelela indlela kwaye emva kweyiphi indlela emva kokuqulunqwa kwetafile ye-nail kuyonakaliswe. Yaye yonke into kukuba ngaphambi kokuba wenze le nkqubo, isikhonkwane siyanqunyulwa, kwaye ukuba unayo inkqubo yenkosi ngaphandle kwamava, unokunciphisa ukwedlula. Master xa ulungiselela inkqubo yokwakha, unciphisa isiqingatha sobunzima beplate. Oku kukuqinisekisa ukuba isikhonkwane senziwe kakuhle kunye nezinto eziphathekayo. Njengoko unako ukubona nangaphambi kokukwakheka, isikhonkwane sonakaliswe.
Abasetyhini abaqala ukubuyela kwi-salon, apho izipikili zikhula, banomdla ukuba izinto ezisetyenziselwa ikhonkwane engumsebenzi zingonakalisa impilo. Ezi zinto azibangela ingozi. Kodwa ngenxa yesinye isizathu kufuneka ucinge ngendlela, emva kokuzakhela izipikili ezingumgubo, unokubuyisela izipikili zakho. Emva koko, amacwecwe awonakaliswe, kungekhona kuphela ekulungiseleleni ukwakha, kodwa nangona xa ususa izipikili ezingenziwanga.
Ukuze izikhonkwane zaseAlkrikhi ezichithwe ngokwazo zihlanjwe kwi-ipilisi ye-nail, zigcinwa kude kube yinqumlezo ize iwele. Iigelisi ezikhonkwane zidinga ukunqunyulwa, kodwa akukho mlawuli oza kunika isiqinisekiso sokuba xa esika, akayi kufaka isikhonkwane sakhe sendawo. Ngoko ke, emva kokususa izipikili zokufakelwa, izipikili zakho ziya kufuneka zibuyiselwe.
Indlela yokubuyisela izipikili?
Xa uya kususa izikhonkwane ezizenzekelayo, naluphi na izinto ezinokubaluleka inkosi eyayizisebenzisayo, kwaye kunye nefayile echanekileyo yefayile, nokuba kunjani na, iplati iya kubonakaliswa, kuya kufuneka ibuyiselwe. Kwaye ukuba kusetyenziswe izinto ezisemgangathweni, kunye nokufakelwa okungekho kakuhle, isitya se-nail sinokuluhlaza okwesibhakabhaka, esincinci, esomile ngemingxuma, kunye nemigodi. Yintoni okufuneka uyenze ngoko?
Okokuqala, ubuncinane kwexesha kufuneka ulahle inkqubo yokwakha. Kwaye kwenzeka okokuba amantombazana asetyenziselwa izipikili ezingenakwenziwa, kwaye akavumeli ukuba ucinge ukuba uyasuse. Oku kuyimfuneko yokwenza, kuba zonke izilungiso kunye nokwakhiwa okulandelayo, isikhonkwane sinzima ngakumbi. Kwimihlathi yesikhonkwane, ama-groove avela, kwaye ukuze aphele, kuthatha ixesha ade ikhule ngokugcwele. Kwaye xa bekhulela izipikili, kufuneka usebenzise iingubo zokugqoka. Kwaye ukukhawuleza ukukhula kwezipikili kusasa kwioli kunye nokongezwa kweziqhamo zemifuno.
Ukuba unxibe izikhonkwane eziyiminyaka emininzi, ulusu lwakho luya kumisa kwiingcebiso zeminwe yakho kunye ne-burrs. Kuvela ke ngoko, ukuba ulusu ngexesha lohlobo lweepiki, iikhemikhali ziyawa. Ezi zinto kufuneka zisetyenziswe kuphela kwiphonkwane, kwaye ungavumeli ukuba izinto zifike ekhumbeni. Ukuba ezi zinto zifikeleleke kolukhuni, kubakho ukoma. Oku kuya kunceda izixhobo zengcali ezenzelwe ukunciphisa i-cuticle. Kubalulekile ukhethe amalungiselelo ngamafutha omzimba, angene ngaphakathi kancinci aze alondoloze umswakama, anondle ulusu.
Iingxaki ezivela emva kokususwa kwezipikili zokufakelwa.
Xa izikhonkwane ezikhutshwayo zisuswe, abafazi banokubona iindawo eziluhlaza okanye ezibomvu kwizikhonkwane zabo zomthonyama. Musa ukwesaba. Akuyena ifungi, iyibumba nje. Ungayilahla le nto ukuba, njengokuba kufuneka ikhonkwane elithambileyo ipolise ubuso bekhopi, ize ihlaziye. Sebenzisa utywala okanye i-lacquer liquid as a degreaser. Ukuba kumacinci akho okanye emiphongolweni yakho kwakukho i-maculae musa ukuya kule nkosi, nqabela iiveki ukusuka kwiindawo zokugada. Ininzi inokwenzeka ukuba inkosi yakho ayilandelanga ubuchwepheshe abathile kwizandiso zesikhonkwane.
Ukuba wawuyalela izipikili eziqhakazileyo, ngaphakathi kwazo zazingabonakaliswa, i-sequin, iintyatyambo ezomileyo, kwaye unokwazi ukuba izipikili zendalo zihlanganiswe ngamacwecwe anombala okanye aphuzi. Konke oku kubangelwa i-pigment kwisiqwenga sempi. Ukuba izipikili zakhiwe ngokufanelekileyo, ke le ngxaki ayifanele iphakame. Ikhwalithi engafanelekanga yezinto eziphathekayo okanye uluhlu oluncinci lwezinto eziphathekayo lunokubangela ukuba i-pigment ikhonkwane kwiintambo zemvelo. Kubalulekile ukuphosa izipikili ngeetera elithambileyo, ukuziphosa. Kuphezulu kwezikhonkwane kufuneka zibeke iingubo ezingenambala, eziquka ukuqinisa izixhobo. Kufuneka ukuba ukhethe oko kulungiswayo, apho ekubunjweni kwawo kune-calcium. Ngaphambi kokuba usebenzise i-varnish, kufuneka ufake i-fixer. Isiseko esinjalo se-lacquer sinokukhusela izipikili zakho ezivela kwi-solvents kunye nemiphumo engaphandle yangaphandle yee-pigment, eziyingxenye ye-varnish.
Inkqubo yokwandisa izipikili kufuneka yenziwe ngumphathi onamava aphezulu. Ukuba akayilandelanga iteknoloji esekwe, sebenze ngokucocekileyo nangokucokisekileyo, ngoko unokuba neengxaki ezinzulu ngezipikili. Emva koko akufuneki ukukhangela i-web, indlela yokubuyiselwa emva kokuzakhela izipikili zakho, kwaye kuya kufuneka uphendule oogqirha uncedo. Xa izipikili zifakwa ngokungafanelekanga, unako ukufumana izipikili ezijika, ukutshiswa kweekhemikhali, izifo zenyama. Idilesi kumasters ahlolisweyo, apho kukho iimpendulo ezichanekileyo. Kubalulekile ukuba nenkosi eyaziwa nabo kunye nabanelisekile kubo. Kwaye kubakho okuyimfuneko ukuhlawula ingqalelo ukuba kuyimfuneko ukusebenzisa iinkonzo zenkosi, kwaye kungekhona i-salon yokuzilungisa. Emva koko, ungafikelela kwenye ingcali.
Ukuze izipikili zakho zibuyele kumbonakalo oqhelekileyo, kufuneka wenze iibhafini zokuhlamba izandla. Le nkqubo inokuchaphazela ulusu lwezandla kunye nezikhonkwane. Ukwakhiwa kweparafini kubandakanya amafutha kunye namavithamini, izipikili zibuyiselwa ngokukhawuleza. Kumele kubekho iiplanga zeparafini kunye neetereyi zetyuwa. Kwiiplati zeedonki kufuneka zihluthe ioli yeoli, iya kuba nefuthe lokuvuselela. I-antiseptic enhle i-oil tree ye-tea, inondla i-nail kakuhle. Isetyenziselwa ukuxubha.
Ekugqibeleni, siya kwandisa, indlela enokubuyisela ngayo izipikili emva kokwakha. Okokuba, xa ukhetha inkcazo kufuneka uqaphele ukuba ungayisebenzisi imali, izikhwepha kunye namandla ekubuyiseleni izipikili zakho. Kuphela umphathi oyingcali kufuneka enze iinkqubo ezifana nokufanisa, ukususa izipikili.
Indlela yokupenda kakuhle iiphonkwane zakho ekhaya?
Ukunakekelwa kweeyil efanelekileyo ekhaya
Indlela yokwenza ipapasho lomaphephandaba
Ukunyamekela izipikili kunye nezandla
Ndimele ndiyenze kaninzi kangakanani i-pedicure?
Iifomu kunye nosuku lukaMama kwiprose nevesi. I-SMS emfutshane iyavuyela umama, umhlobo, umkhwekazi, intombi
Yintoni enokuyenza xa umntu ehlasela wena
I-Appetizer yamaqanda othosiweyo
Indlela yokukhohlisa umntu ngamagama?
Unyango ngeoli engagqitywanga
Ungayigcina njani ilusu elincinci kunye nelinye?
"Iintliziyo" ezenziwe ngecokole emhlophe kunye nama-almond kunye neziqhamo
Iiperto kunye ne-tartlets
Isaladi egayiweyo kunye nolwandle